कांग्रेस गैँडाकोटमा कसले मार्ला बाजी ? – उज्यालो खबर
कांग्रेस गैँडाकोटमा कसले मार्ला बाजी ?
गैँडाकोट । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत गैँडाकोट नगरपालिकामा नेतृत्वमा आउनका लागि नेपाली काग्रेसका युवानेताहरु लागि परेका छन् । भोलिका लागि तय भएको नगरको अधिवेशन आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै केहिदिन पर जाने देखिएको छ ।
हालसम्म कांग्रेस गैँडाकोट नगर समितिको सभापति पदका लागि युवा नेता बद्री सापकोटा, खेमराज सापकोटा र खगराज सापकोटा लागि परेका छन् । कांग्रेस गैँडाकोटका पुराना नेता नरहरी सापकोटाले पनि आफुपनि सभापतिको आकांक्षी भन्दै अन्तिम समयमा आएर प्रचार गरेका छन् ।
सभापति पदका लागि चारजनाले ईच्छा ब्यक्त गरेको भएपनि हालसम्मको अवस्था र कंग्रेसजनहरुको भित्री कथा बुझ्दा बद्री सापकोटा र खेमराज सापकोटा विच नै मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । सुरुवात देखिनै सभापतिको रुपमा आफुुलाई उभ्याएका खगराज सापकोटाले आफुलाई कहिकतै सुरक्षित रुपमा अवतरण गराइएको खण्डमा ब्याक हुन समेत तयार देखिएका छन् । तर शुक्रबार दिउसो सम्मको अवस्थालाई हेर्दा खगराज सापकोटा समेत प्रतिष्पर्धीकै रुपमा आउने देखिएको छ ।
गैँडाकोट नगरपालिकाका झण्डै ४८५ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुले नगरको अधिवेशनमा मत दिनेछन् । हाल छानिएका प्रतिनिधिहरु अधिकांस नयाँ तथा युवा विचारले भरिएको हुँदा बद्री सापकोटाकै पल्लाभारी हुने चर्चा काग्रेसभित्र छ । त्यसैगरी सभापतिकै अर्का दावेदार खेमराज सापकोटा पनि उत्तिकै बलियो रहेको उनि निकटस्थहरु बताउछन । सहकारी क्षेत्रमा लामो समयको अनुभव संगालेका खेमराजले पनि भित्रभित्रै आफुलाई बलियो उमेदवारको रुपमा उभ्याएको स्रोत बताउछ ।
उपाध्यक्ष पदका लागि हालसम्म कविराज आचार्य र रोशनभक्त अधिकारी र राजेश श्रेष्ठले उमेदवारी दिने भन्दै प्रचारप्रसारलाई तिव्र पारेका छन् । उपाध्यक्ष पदमा कसले बाजी मार्ला भनेर हालसम्म कहिकतै टिप्पणी भएको पाइएको छैन ।
काग्रेस गैँडाकोटको सचिव पदका लागि हालसम्म चारजनाको नाम चर्चामा छ । कृष्णमुरारी खनाल, गोविन्द घिमिरे, हरिराम सापकोटा र धनीश्वर गौतम सचिव पदका मुख्य प्रतिष्पर्धीको रुपमा देखिएका छन् । यी मध्ये कृष्णमुरारी खनाल र गोविन्द घिमिरे तुलानात्मक रुपमा बलियो देखिएका छन् ।
सहसचिव पदमा हालसम्म चारजनाले उमेदवारी दिने बताएका छन् । हरि पौडेल, राजेन्द्र प्रसाद गौडेल, बुद्धी न्यूरे र कृष्ण सापकोटा सहसचिव पदका लागि देखिएका नामहरु हुन । सहसचिवमा देखिएका चारजना मध्ये युवाहरुमाझ हरि पौडेल भिजेको देखिन्छ ।